2017-09-06 | fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट
Daily Archives: 2017-09-06
2017-09-06	Leaveacomment 166 Views
आखिर किन गर्‍यो माओवादीले नागरिकको हत्या? माओत्सेतुङद्वारा प्रतिपादित जनयुद्ध कार्यक्रममा सर्वसाधारणलाई यातना नदिनू भन्ने निर्देशन छ। एक त २०५२ सालमा लोकतन्त्र आगमनको ६ वर्ष नबित्दै ऐतिहासिक उत्पीडनलाई खलास पार्न सशस्त्र द्वन्द्व आवश्यक थियो भन्ने माओवादी नेतागणको दाबी स्विकार्न गाह्रो छ। लडाइँ गर्नु नै थियो भने त्यो राज्यसत्ता तथा सुरक्षा फौजतर्फ लक्षित हुनुपर्नेमा निहत्था, निर्दोष स्थानीय अगुवा, शिक्षक, समाजसेवी, कार्यकर्ता, व्यापारी, ...
2017-09-06	Leaveacomment 208 Views
यस हप्ता नेपाल आइडलका लागि भोटिङ गर्दा पैसा नलाग्ने भएको छ । नेपाल आइडलले आफ्नो फेसबुक पेजमा सूचना जारी गरी यस्तो जानकारी दिएको हो । नेपाल आइडलका लागि अन्तिम तीन प्रतिस्पर्धीको छनौट गर्नका लागि एसएमएस भोटिङ गर्ने समय एक साता बढाएपछि नेपाल आइडल आयोजकको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको थियो ।
2017-09-06	Leaveacomment 87 Views
समाचारपाटी, पोखरा, २१ भदौ । नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठनको ४ नम्बर प्रदेशको भेला सम्पन्न भएको छ । मंगलबार सम्पन्न उक्त भेलाले यातायात व्यवसायी योगेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा ४० सदस्यीय प्रदेश समिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ । समितिको सहसंयोजकमा बलराम सापकोटा चयन भएका छन् । पूर्व मन्त्री तथा एमाले सल्लाहकार परिषदका उपाध्यक्ष खगराज अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो । यातायात ...
2017-09-06	Leaveacomment 51 Views
समाचारपाटी, भक्तपुर, २१ भदौ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले नेपालमा तस्करी र भ्रष्ट्राचारलाई सरकारले नै प्रोत्साहित गरिरहेको बताएका छन् । रफत सञ्चार क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता पाण्डेले सरकारले तत्काल भ्रष्ट्राचार र तस्करी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । सरकारले अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायलाई सहयोग नगरेको कारण नेपालमा ...
2017-09-06	Leaveacomment 69 Views
समाचारपाटी, पोखरा, २१ भदौ । कास्की जिल्ला स्काउटले बाढीपीडितलाई राहत वितरण गरेको छ । नवप्रभात ओपन क्रियुका पूर्व सिनियर टिममेट तथा स्काउट मास्टर श्याम गिरीको संयोजकत्वमा संकलन गरिएको राहत मोरङ, विराटनगरमा वितरण गरिएको हो । कास्कीका विभिन्न स्काउट आवद्ध विद्यालय, संघसंस्था तथा व्यक्तिबाट संकलित रकम मोरङका विद्यालयका विद्यार्थीलाई राहत वितरण गरिएको हो । विराटनगरमा सिद्धकाली प्राविका प्रअ देवनारायण मण्डल, जनता प्राविका ...
2017-09-06	Leaveacomment 157 Views
उम्मेदवार छनौटको विवादले नेपाली कांग्रेसको जिल्ला पार्टी कार्यालय सिरहामा खुकुरी हानाहान भएको छ । मेयरको टिकट पाएका डा. सुभाषचन्द्र यादव र असन्तुष्ट उपेन्द्र यादव पक्षबीच खुकुरी हानाहान भएको हो । दुई पक्षबीच भएको झडपमा १० जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेहरुमा नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर ३ का क्षेत्रीय सभापति संजय यादव, बुधन यादव, देबनाथ सहनी, राजेश्वर यादव, रामबाबु यादव, ...
2017-09-06	Leaveacomment 62 Views
समाचारपाटी, नवलपरासी, २१ भदौ । नवलपरासीमा राष्ट्रिय जनावर गाई काटेर मासु बेचेको आरोपमा दुई युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गाई काटेको आरोपमा घटनाको चार दिनपछि नवलपरासी मध्यविन्दु नगरपालिका–९ वसन्तपुरमा स्थानीयवासी बुद्ध विकलाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको हो । विकले पालेको ३ वर्षको गाई गाउँकै केसी विकले सामुदायिक वनमा काटेर गाउँलेलाई बेचेको प्रहरीको भनाइ छ । स्थानीय थुम्कीदेवी सामुदायिक वनमा ...
2017-09-06	Leaveacomment 181 Views
काठमाडौं, २१ भदौं । यसपाली दशैंको लागि भदौं २८ गतेबाट नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकमै गएर नोट साट्नेहरुले प्रतिव्यक्ति २७ हजार रुपैयाँसम्म साट्न सक्नेछन् । यसपटकबाट सरकारी बैंकबाट समेत नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, सरकारी बैंकमा नोट साट्न जाँदा प्रत्तिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ मात्र नयाँ नोट साट्न पाइने भएको हो । ...
2017-09-06	Leaveacomment 234 Views
एजेन्सी । बजारमा विभिन्न खालका कण्डम पाइन्छन् । युवा युवतीले ती कण्डमलाई खपत पनि गरिरहेका छन् । तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ । बजारमा अब ‘शाकाहारी’ कण्डम पनि पाइनेछ । सस्टेन नेचुरल ब्रान्ड नामबाट ‘शाकाहारी कण्डम आएको हो । कुनै पनि जनावरको उत्पादन प्रयोग गर्न अस्विकार गर्ने शाकाहारीका लागि उक्त कम्पनीले सस्टेन कण्डमको क्यासिन ल्याएको दाबी गरेको छ । क्यासिन एउटा ...
2017-09-06	Leaveacomment 193 Views
काठमाडौं, २१ भदौ । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा बुधबार चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् । चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा महरा ६ दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आज त्यसतर्फ जान लागेका हुन् । नयाँ संविधान घोषणापछि चीन भ्रमणमा जाने महरा दोस्रो परराष्ट्रमन्त्री हुन् । यसअघि केपी ओली नेतृत्व सरकारका तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले चीनको ६ दिने औपचारिक भ्रमण ...